Ahoana no fiasan'ny fitaovana counterlink counter?
Rehefa mamorona fanentanana fananganana rohy ianao, dia mila mahafantatra ny lanjan'ny rohy aterinao. Raha fantatrao ny habetsaky ny fichier iray mendrika dia azonao atao ny mandinika raha mendrika ny volanao, ny fotoana sy ny ezaka na tsia. Azonao atao ny manombantombana ireo rohy miditra amin'ny tanana na mampiasa fitaovana ho an'ny counterlink. Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny rohy ekena amin'ny rohy ivelany ary antenaina fa hanampy anao hanamafy ny fanentanana fananganana rohy. Noho izany, andeha isika hijery akaiky ireo fomba fampiharana ireo.
Links that link to them
Ny antony voalohany dia tokony hifantoka amin'ny famoronana rohy amin'ny tranokalanao. Ny loharanon'ny tranonkala mifandray amin'ny tranokala iray dia mamaritra ny fahefana sy ny fahefana. Ny vohikala PR ambony dia mifandray amin'ny sehatra iray, ny tsaratsara kokoa aminy dia hihaona amin'ny Google. Mba hanatsarana ny fahitana ny tranokalanao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana Google dia tokony hikatsaka ny rohy mankany anaty ianao raha tsy avy amin'ny loharanom-baovao toy izany.
Ny fitaovana ampanaovin'ny maro dia manampy amin'ny fandrefesana ny kalitaon'ny rohy tafiditra. Azo inoana fa efa nandre momba ny sasany amin'izy ireo ianao. Manoro hevitra aho hampiasa fitaovana toy ny Semalt Web Analyzer na Ahrefs. Ireo fitaovana ireo dia afaka manome anao ny antontan-kevitra marina indrindra momba ny loharano fanorenana rohy. Noho izany na azonao ampiasaina izany amin'ny DA, DR, TF, CF na ny fomba fandinihana azy dia mbola ny isa iray ihany no mamaritra ny tanjaky ny rohy (tsy fisalasalana).
Mamaritra ny fifamoivoizana amin'ny rohy tonga
Ny tanjona voalohany amin'ny fanorenana rohy ho avy dia ny mahazo fifamoivoizana tarihina amin'ny alalan'izy ireo. Izany no antony mahatonga ny fifamoivoizana amin'ny fifandraisana miditra dia TSY MISY. Raha loharanom-baovao marobe ny loharanon-tranonkala iray, dia azo inoana fa site malaza izay manome votoaty goavana ny mpampiasa. Midika izany fa mety hahatonga azy ho ambony ihany koa ny fitaovam-pitadiavana, ka hitombo hatrany ny sidina, ny fifamoivoizana ary ny fiovam-po manaraka.
Amin'ny ankapobeny, ny loharanon-tranonkala izay mamorona lozam-pifamoivoizana maro dia heverina ho mendri-piderana noho ireto antony manaraka ireto:
Ny fampahalalam-baovao dia mahasoa ny mametraka azy ao Google satria ity karazan-doka ity dia manombatombana loharanom-baovaon'ny Internet ary manan-danja amin'ny isan'ny mpitsidika izay tonga amin'ny tranonkala iray avy amin'ny fikarohana biolojika. Midika izany fa tranonkala iray azonao ny rohy dia mety hampitombo ny kalitao ary ahafahana mamoaka rohy bebe kokoa, mampitombo ny rohy tafiditra ao anatinao.
Fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao
Ireo tranonkala miaraka amin'ny varotra dia hahatonga ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao amin'ny alalan'ny backlinks. Hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fiovam-ponao izany ary hanangana ny fahefanao eo imason'i Google. Na dia mbola mahery kokoa aza ny adihevitra. Na izany aza, mila maka antoka ianao fa mankany amin'ny tranokala izay afaka mitondra fifamoivoizana amin'ny pejinao.
Isaky ny manorina rohy ianao, dia tokony ho azonao antoka fa mametraka azy ireo amin'ny mitovy amin'ny loharanom-pejy na loharano nafinao ianao amin'ny tanjonao toerana. Ankoatra izay, ny rohy dia mila ampidirina ao anaty votoaty mifanentana mba hanomezana ny mpampiasa ny fahatakarana mazava ny zavatra ho hitan'izy ireo aorian'ny fampidiranao rohy Source .